राष्ट्रिय खबर – Radio Kushum
यो पढेपछि सायद तपाईंले आजैबाट दुध चिया छोड्नुहुन्छ !
radiokushum	 Mar 10, 2019 0
चिया धेरै नेपालीले पिउँने पेय पदार्थमा पर्छ । बिहान ओछ्यानमै चिया पिउने त नेपालीको चलन नै बनेको छ । कतिपय त चिया नपिई नित्यकर्म गर्न सक्दैनन् । अधिकांश नेपालीले बिहान चिया पिउँछन् । के बिहान खाली पेटमा चिया पिउँनु राम्रो बानी हो रु बिभिन्न…
अहिलेसम्मको नतिजा : कांग्रेस, एमाले र माओवादी कसको कति ?
radiokushum	 May 18, 2017 0
काठमाडौं, जेठ २ – पहिलो चरणको स्थानीय तह चुनाव भएका ३४ जिल्लाको स्थानीय तहमा अहिले मतगणना भइरहेको छ । अहिलेसम्म प्रमुखका विजेताहरु : नेकपा एमाले प्रमुख जितेका ठाउँ १) कास्कीको मादी गाउँपालिका– वेदबहादुर गुरुङ (श्याम) २) कास्कीको…